MSN? saaxiibadda ugu waanagsan adduunka - CIYAARO.COM
Home / History / MSN? saaxiibadda ugu waanagsan adduunka	MSN? saaxiibadda ugu waanagsan adduunka
By Gamadiid Guurre	Updated: February 19, 2016	Tweet
Wareysi lagu daabacay toddobaadkan wargeys ka soo baxa Croatian oo la jiraah Jutarnji list, ayaa Ivan Rakitic wuxuu ku amaanay saaxiibtinimadda ka dhaxeysa Leo Messi, Luis Suárez iyo Neymar, kuwaasoo loo yaqaan MSN. Arrintaan waxey noqotay mowduuc aad looga hadlo.
Kadib markii bartimihii toddobaadkaan uu Cristiano Ronaldo sheegay in aan loo baahneyn in wehel loo helo ciyaartoyga si kooxdu ay guul u gaarto.
“Wallow ay dabeecaddo kala duwan leeyihiin haddan waxey saaxiibo ku yihiin garoonka, waxey u muuqan kartaa ka badbadin laakiin waxaan kuu sheegayaa in Messi, Suárez iyoNeymar ay yihiin saaxiibadda ugu wanaagsan, waxaaba macquul xitaa ah in ay yihiin saaxiibadda ugu wanaagsan ee taariikhdda kubadda cagta”, ayaa laga soo xigtay Rakitic.
Related posts:Real Madrid oo markii 18aad qaadatay Spanish Cup-kaImis ciyaartoy ayaa miyir beeshay ama dhintay iyagoo garoonka ku jira oo ciyaaraya Dooro ciyaaryahanka sanadka AfricaShare/Bookmark	MessinewNeymarSuarez